I-Pantheon: I-WordPress enzulu okanye i-Drupal Hosting nge-Relic entsha | Martech Zone
Sineeplagi ezingama-47 ezisebenzayo kufakelo lwethu lweWordPress. Zininzi iiplagi, uninzi lwazo olunokucothisa ukusebenza kweWindowsPress. Senza iimvavanyo zesantya esibanzi ngaphambi kokuhambisa iiplagi, okanye sinokusebenzisa ezinye zeengcinga zokuhlaziya umxholo wethu ukuze zibaleke ngokukhawuleza kwaye kunciphe irhafu kwiiseva zethu. Isantya siyimfuneko kule mihla-kokubini ukusuka kwinqanaba lamava omsebenzisi kunye ne-enjini yokukhangela ye-engile.
Ukuba bendinesikhalazo malunga nesiqhelo zokubamba iqonga, kukuba ayikuvumeli ukuba usombulule ingxaki kwaye uchonge imibuzo kunye neeasethi kunye nendlela eziyichaphazela ngayo inkqubo yolawulo lomxholo. Into elula njengokulungisa isiseko sedatha yakho inokulinciphisa ixesha elithatha amaphepha akho ukulayisha ngeqhezu. I-Pantheon iyatshintsha oku!
efanisa liqonga lokusingathwa okuphezulu okuphezulu kwe-WordPress kunye nomphuhlisi weDrum. I-Pantheon ibonelela amaqela ewebhu zonke izixhobo zonjiniyela, ukubamba, ukukala, ukusebenza, ukuhamba komsebenzi, kunye noomatshini abazisebenzisayo abafuna ukwakha ezona webhusayithi zibalaseleyo emhlabeni.
Lawula iiSayithi ngokulula -Ukulawula onke amasayithi akho eWindowsPress kunye neDrupal kwideshibhodi enye. Sebenzisana kwiiprojekthi ngokulula phakathi kwamalungu eqela.
Ngokuzenzekelayo DevOps Zikhulule kulondolozo lweseva. Vumela i-Pantheon i-automate sysadmin isebenze- ungagxila ekuphuhliseni iiwebhusayithi ezinkulu.
Ukuhamba komsebenzi kwi-Agile yeNene - Push utshintsho ngokukhawuleza kwaye rhoqo. Sebenzisa ukudityaniswa okuqhubekayo nolawulo lwenguqulo kunye nokuphuma kwebhokisi kwi-dev, kuvavanyo, nakwindawo ezihlala kuyo.
Ngamandla amanyanisiweyo I-Pantheon kunye neNew Relic Pro, Abathengi bethu banezixhobo zokwakha, ukumilisela, kunye nokuqhuba iiwebhusayithi ezimangalisayo, ngokukhawuleza nangaphandle kwexhala, ngokusebenza okuphezulu. I-Relic Pro entsha iyancedisana neqonga lePantheon kwaye siyavuya ukunikezela ngokukhethekileyo, ukuphela kwewebhu kunye nophuhliso lwewebhu kunye kubahlalutyi isuti ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo kubasebenzisi bePheheon. UZack Rosen, uMseki kunye ne-CEO yePantheon
Abasebenzisi bePantheon ngoku banokuqinisekisa ukusebenza kwewebhu okuphezulu kuwo onke amanqanaba emveliso-ukusuka kuphuhliso ukuya kupapasho lwangoku. Ukusebenza okuphambili kubandakanya:
Ukubonakala kwenqanaba lekhowudi uxhobisa abasebenzisi ukuba babone oyena nobangela wemicimbi yokusebenza, ukuhla ukuya kwintsebenzo yomnxeba, yokufumanisa isifo ngokufanelekileyo kunye nokusombulula ingxaki.
Ukuhanjiswa kweflegi ivumela abaphuhlisi ukuba babeke esweni ukusebenza ngokuhamba kwexesha kwaye bakhawuleze babone izinto ezinengxaki.
Ukufikelela kwi-Relic eNtsha kuyo yonke indawo yophuhliso -Imeko-bume ye-Multidev, i-Dev, uVavanyo, kunye noPhila- yenza ukuba abasebenzisi babambe imiba yokusebenza ngaphambi kokuba baphile kwaye bathumele ngokuzithemba.
Abasebenzisi bePantheon baya kufumana ukufikelela kwiNew Relic APM Pro kwangoko kwaye banokufikelela ekusebenzeni kwesiza kubahlalutyi Kwideshibhodi yeqonga lePantheon.
tags: bangelaukuhanjiswa kwekhowudidrupalUphuhliso lonyangoI-Relic entshapro entshaoothixoUlawulo lwewebhusayithiWordPressUphuhliso lwegamayokupasa amagamaukusebenza kwegama